Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa Group yazisa ngeCEO entsha yeAir Dolomiti
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
USteffen Harbarth umphathi we-Air Dolomiti omtsha
Njengenye yeemarike ezibaluleke kakhulu zeQela laseLufthansa, i-Itali kunye nophuhliso oluqhubekayo lwe-Air Dolomiti kubaluleke kakhulu. USteffen Harbarth lolona khetho lufanelekileyo kulo mngeni mtsha enikwa amava akhe abonakalayo kulawulo lwenqwelomoya kunye noMlawuli oLawulayo ojongene neenkqubo zokusebenza kunye noMphathi oPhendulayo eLufthansa CityLine.
Omnye wabalawuli ababini beLufthansa CityLine baya kuba yi-CEO yeAir Dolomiti ngoJanuwari 2022.
USteffen Harbarth uza kungena ezihlangwini zikaJorg Eberhart.
USteffen Harbarth ebelilungu leBhodi eLawulayo yeSixeko saseLufthansa ukusukela nge-1 Januwari 2019.
USteffen Harbarth, omnye wabalawuli ababini beLufthansa CityLine, uya kuba yi-CEO yeAir Dolomiti nge-1 Januwari 2022.
Ungena ezihlangwini zikaJörg Eberhart, osandula ukuqeshwa njenge “Ntloko yeQhinga noPhuhliso loMbutho” e ILufthansa Group ukusukela nge-1 ka-Okthobha ka-2021. UKapteni Alberto Casamatti, uMlawuli-Jikelele wezoKwenziwa koMsebenzi noMphathi oPhendulayo, uya kuba yi-CEO yexeshana kumphathi we-Italiya i-Air Dolomiti ade uSteffen Harbarth aqale indima yakhe entsha kunyaka olandelayo.
U-Ola Hansson, iGosa eliyiNtloko lezeMisebenzi eLufthansa kwaye ujongene notyalo-mali lwenqwelomoya kwiAir Dolomiti, uthi: “Ndichulumancile kakhulu ukuba uSteffen Harbarth uzakuba yintsha Air Dolomiti CEO. Njengenye yeemarike ezibaluleke kakhulu zeQela laseLufthansa, i-Itali kunye nophuhliso oluqhubekayo lwe-Air Dolomiti kubaluleke kakhulu. USteffen Harbarth lolona khetho lufanelekileyo kulo mngeni mtsha ngenxa yamava akhe kulawulo lwenqwelomoya nanjengoMlawuli oLawulayo ojongene neenkqubo zokusebenza kunye noMlawuli oPhendulayo eLufthansa CityLine. ”
Ukusukela nge-1 Januwari 2019, uSteffen Harbarth ulilungu leBhodi eLawulayo yeSixeko saseLufthansa. Ngaphambi koku, uSteffen Harbarth wayebambe izikhundla ezininzi zolawulo kwiqela laseLufthansa. Umzekelo, kwiziko laseLufthansa eMunich wayenoxanduva lolawulo kunye neenkqubo zentengiso zeLufthansa Hub Airlines, ezalandela isikhundla sakhe njengoSekela Mongameli wentengiso yeLufthansa Group Airlines eAsia-Pacific.
IDolomiti yomoya SpA Yinqwelomoya yenqwelomoya yommandla wase-Itali kunye ne-ofisi yayo eyintloko eDossobuono, eVillafranca di Verona, e-Itali, isiseko sokusebenza eVerona Villafranca Airport kunye nezixeko ezijolise kwisikhululo senqwelomoya saseMunich naseFrankfurt Airport eJamani. U-Air Dolomiti yinkampani ephethwe ngokupheleleyo yiLufthansa.
The Iqela leLufthansa (ngokusemthethweni iDeutsche Lufthansa AG, edla ngokufutshane ukuba yiLufthansa) yeyona moya inkulu yaseJamani ethi, xa idityaniswe neenkampani zayo, yeyesibini yenqwelomoya enkulu eYurophu ngokwabantu abakhweleyo.
Iqela laseLufthansa libandakanya iLufthansa, iSwitzerland, iAustria Airlines kunye neBrussels Airlines. I-Eurowings kunye ne "Lufthansa" yamaqabane engingqi nawo ngamalungu eqela. Ngenxa yobhubhane we-COVID-19 inkampani inabanini bakarhulumente ukusukela ngoJulayi 2020.